Madaxweyne Xasan oo oo ka hadlay xatooyadii Bangiga dhexe – XOGMAAL.COM
Madaxweyne Xasan oo oo ka hadlay xatooyadii Bangiga dhexe
Kn: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii u horeysay ka hadlay lacagtii laga xaday Bangiga Dhexe, isagoo caddeeyay inay jiraan dad Mas’uuliyiin loo xiray oo su’aalo ay weydiinayaan Hey’adaha kala duwan ee Amniga.
Madaxweynaha ayaa sheegay in arrinta ka dhacday Bangiga Dhexe aanay aheyn musuq maasuq, balse ay tahay xatooyo dambi ah oo ay ku kaceen dad qasnada Bangiga ka shaqeynayay.
“Bangiga waxa ka dhacay musuq maasuq ma ahan ee waa xatooyo, waxaa u maleynayaa musuq maasuq iyo xatooyo inay labo kala yihiin, dadka qasnada ka shaqeynayay dad ka mid ah ayaa lacagtii Bangiga ku jirtay doolar faalso ah ugu bedelay oo doolar sax ah ka qaatay”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa sheegay in Laamaha Amniga sida Booliska, Nabadsugida iyo Xeer Ilaalinta ay ku jiraan arrinta, isla markaana socota baaritaanka, isagoo intaa ku daray in wixii baaritaankaas ka soo kordha loo soo bandhigayo shacabka, si muuqaalka Bangiga loo wanaajiyo.
Madaxweynaha ayaa sheegay dad lagu tuhunsan yahay inay xadeen lacagtaas ay baxsadeen, laguna raad-joogo, waxaana uu intaa ku daray in cadaalad la horkeeni doono sida uu hadalka u dhigay.
Guddoomiyaha Bangiga Dhexe Bashiir Ciise Cali ayaa sheegay in lacag dhan $530,000, una dhiganta Nus-milyan dollar laga xaday Bangiga, isla markaana uu xaday mid ka mid ah qasnajiyada Bangiga, kaasoo la sheegay inuu baxsaday.
Siyaasiyiinta ayaa ku baaqay in baaritaan madax banaan lagu sameeyo lacagta laga xaday Bangiga Dhexe, iyagoo wal wal ka muujinaya sababaha xilligan ku soo beegay, maadaama bilaha soo socda ay dalka ka dhici doonaan doorashooyin.
Daawo Sawirro Indho-daraandar ah oo laga soo qaaday xeebta liido ee dhacda bariga Caasimadda Soomaaliya
Turkiga oo hadiyado lagu ciido u direy dadka reer Qasa